Posted on February 26, 2020 by Qeerroo
Uummati seenaa hinqabne biyya hinqabu. Seenaan uummata tokkoo tikfamuun kan barbaachiseef ragaa abbummaa biyyichaa sabichi qabu kan of keessaa qabuu fi godaannisa halagaan irraan gahaa ture Dhalootni baratee roorroon wal fakkaataan saba isaatti akka hin dhufne qophaa’uu akka qabuuf seenaan saba tokkoo dhalootaa dhalootatti darba. Qaamni seenaa uummata tokkoo haaluu fi soba fakkeessee lallabu qaama biyya sana saamuu barbaadudha. Biyyicha dhabamsiisuuf mallattoolee eenyummaa saba achirraa calaqqisiisan balleessuu, maqaa lafaa jijjiiruu fi seenaa uumatichaa dhabamsiisuun eegalama.
Qaamni seenaa uummataa haalu isa uummaaticha dhabamsiisuuf abbalu ta’uu hubachuun barbaachisaadha. Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo seenaan lubbuu qaba jenna. Seenaan ni dubbata, ni lallaba. Seenaa uummata keenya Oromoo caalaa kan nu mararus hinjiru. Sabni keenya seenaa suukanneessaa, seenaa gootummaa fi seenaa ogummaa garaagaraa lafa kaahee darbeera; sana nutu tiksa. Seenaan Oromoo kaleessaa har’a dhalootaan baratamuu fi dhalootaan qoratamuu qaba jennee kan amannu nuti Qeerroon, seenaa suukanneessaa giti bittaa Habashaa nurraan gahaa ture kan qorannoon galmaa’ee jiru tikfamee kan ammallee uummaticha keessa jiru barreeffamee akka ol taa’uuf hojjenna.
Jechootiin dhimma Siidaa Aanolee fi calanqoon wal qabsiifamee nam-qeenxee fi qaamolee mootummaa afarsaniin, seenaa dhugaa uummata keenya irratti ta’e haalanii “Sheekkoo fi durdurii” fakkeessuutti hojii jiramu cimsinee balaaleffanna. Gochaan akkanaa saamicha seenaa fi saamicha biyyaati jenna akkasidhas. Uummata keenya tilmaama waggaa 100 dura harma isaa dhabee fi miila isaa dhabaa ture, dhugaa uummata keenya irratti Minilikiin raawwatame haaluun ‘gochaa sana fakkaatu Oromoo irratti deebifna!’ Kan jedhu ergaa dabarsuudha. Abadan sun Oromoo irratti deebi’ee raawwachuu hin danda’u. Kana haalanii uummata keenya duraa dhugaa isaa awwaalaa, seenaaf eenyummaa saba keenyaa ukkaamsaa bakki gahan yoo jiraate saba keenya keessaa of baasuu qofa.
Qaamni seenaaf eenyummaa Oromoo awwaaluu irratti dalagu diina saba keenyaa ta’uutti amanna nuyi Qeerroon Bilisummaa Oromoo
Gocha Minilik saalfachiisaa seenaa isaa barreeffamaniis ta’ee namootiin baras jiran waan uummata gochaa ture dhalootatti himaa as gahame, gochaa gara jabinaa Minilikiin raawwatamaa ture soba jedhanii irra deddeebiin dubbii Muummichi Ministeera biyyattii dubbataa jiran hedduutti nu dallanse.
Nu dallansuu qofas utuu hin taane wareegama kaffallu kaffallee seenaa suukanneessaa saba keenya irratti raawwatame kana tiksuuf kutannoon qabsoo gochuu akka qabnu nu hubachiisee jira.
Seenaan uummata keenyaa Sirna Impaayeraa Xoophiyaa kana keessatti balfamaa, ceepha’amaa fi seenaan dhugaan Oromoo akka hin barreeffamne danqamaa as gahe. Seenaa qofas utuu hintaane, eenyummaa uummata keenyaaf biyya keenya kanneen ibsan mallattooleef maqaalee lafa keenyaa jijjiiraa akka maqaaleen durumaa ittiin waamamee turee fakkeessanii giti Habashaa maqaa lafa Oromoo illee jijjiiree moggaasaa as gahan. Gochaan sun hanga har’aatti kan Oromoo irratti ta’aa jiru yoo ta’u, kanatti daangaa gochuuf nu Qeerroo Bilisummaa Oromootti dirqamni seenaaf dirqamni biyya keenya Oromiyaa nutti laatamee jiraachuu himuu feena.
Hundaa olitti nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo maqaalee lafaa Oromoo duraa barbadaa’an deebisuudhaan Seenaa saba keenya Oromoo awwaalamee baafnee barreessuudhaan kan barreeffame tiksinee qabsoo bilisummaatti xumura goona! Humnoota seenaa uummata keenyaa haaluu irratti bobbaa’anii jiran daddaffiin gochaa saalfachiisaa fi qaanfachiisaa jibba saba keenyaa irratti fuulleffatee hojjetamaa jiru kana akka dhaaban gaafanna.
Qaama didee seenaaf eenyummaa keenya Oromummaa haaluu irratti fuulleffatu qabsoo keenyaan of irraa dinninna.
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoof